नेपालि अनलाइन दैनिक नेपालि मोडेल तथा कलाकार समाचार
पुतलीको बिहे जव हाम्रो प्रेमको हृदयमा जराहरु फिजारिएपछि थाहा भो यौवनका रसहरु मूल बनेर एक अर्कामा भिजाउदा सागरको गहिराहिमा तरंगित छालहरुले काउकुति लगाउदै गिज्याउदा एकपल्ट फेरि उही बिगतलाई सम्झियौँ उही स्कुल अगाडि भेट हुदा संगै घर बाट निस्कन्थ्यौ स्कुल जान मलाई आनन्दको आभास हुन्थ्योँ उनको किताव बोकिदिदा उनी फ्रकमा मिठाइ पोको पारी टोकेर फुटाउथिन खान्थ्यौ आधि आधि त्यहाँ पबित्र माया र स्नेह मिसिएको थियो जव हाफछुट्टी हुन्थ्यो उसै गरि भेटिन्थ्यौँ मकै भटमासको पोको फुटाउदै खान्थ्यौँ कैयौ पालुवा पलाए होलान कैयौ रातहरु मरेर दिनहरु व्युझीए होलान संग संगै हाम्रो उमेरमा मिसिएका रंगहरुले हाम्रो मुटुलाई रंगाउदै सरिर भित्र पैदा भएका अनेकौ कम्पनले यौटै बनायो जसरि जोडियौ त्यो स्कुले यात्राबाट हिजो त्यसैगरी नदिको छाल ले छुट्टाएर झैँ गरि दुइवटा किनार बनायो अचानक केहि वर्ष पछि स्कुलको गेटमा फेरि भेट भयौँ अनि नियाली रहेका थियौ दुबैले आफ्ना नानि बाबुलाई उही चउर उसैगरी खादै थिए टिफिन साटेर भन्दै थिए जसरि पुतली को बिहे गर्यौ उसैगरी हामि पनि एक हुनु पर्छ जसरि पुतली लाइ एक गरायौ हिजो जुन सपना हाम्रो थियो आज उनिहरूको थियो हिजो हामिले पनि पुतलिको बिहे गराएका थियौँ आज उनिहरूले पनि उसैगरि बिहे गराएका छन् रामकृष्ण अनायास कबिडाँडा
निक्की दुई यौनाङ्ग लिएर जन्मेकी थिइन् । यसबाट उनले धेरै दुःख पाइन् । १७ वर्षकी भएपछि मात्रै उनले आफ्ना दुई योनी भएको थाहा पाएकी थिइन् । उनको महिनावारी असामान्यरुपमा लामो हुन्थ्यो । यसले गर्दा असैह्य पीडाबाट गुगज्रिनुपर्थ्यो । निक्कीले पटक-पटक गर्भपतन गराइन् । अन्ततः उनले शल्यक्रिया गरेर आफ्नो गर्भाशय नै हटाउनुर्‍यो । महिनाबारीका बेला निक्की केही पनि गर्न सक्दिन थिइन् । उनको महिनावारी नै सातदेखि २८ दिनसम्म चल्थ्यो । ‘एकपटक त ६ महिनासम्म निरन्तर रगत आइरह्यो । कयौंपटक म दुईवटा पाइन्ट लगाएर हिड्थेँ, किनकी सेनिटर नेपकिनले पनि एउटा सीमासम्म मात्रै काम गथ्र्यो,’ निक्कीले भनिन् । लगभग २० वर्षअगाडि निक्कीको भेट एन्डीसँग भएको थियो । सन् २०१४ मा उनीहरुले बिहे गरे । बिहेपछि दुवैलाई बच्चाको तिर्संना जाग्यो । निक्कीले भनिन्, ‘मैले तीनपटक गर्भपतन गराउनुपर्‍यो । जब मैले गर्भधारण गर्न चाहन्थेँ, गर्भपतन गराउनु परिहाल्थ्यो । यस्तोमा मेरो शरीरको उर्जा सकिँदै गएको थियो भने मन निराशाले भरिएको थियो ।’ विशेषज्ञहरुको भनाइ छ कि आनुवंशिक बिसंगतिका कारण दुई गुप्तांग हुनेगर्छ । अमेरिकाको मायो क्लिनिकका अनुसार गर्भाशयमा स्त्री भूण दुई साना ट्यूवहरु आपसमा मिलेर बन्छन् । तर, कहिलेकाहीँ यो प्रक्रिया अधुरै रहन्छ । ट्यूवहरु पूर्णरुपमा एकसाथ भएनन् भने दुई अलग-अलग संरचना विकसित हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा एउटा एकदमै पातलो टिस्यू गुप्तांगमा विभाजित हुन्छ । यसको परिणामस्वरुप दुई गुप्तांग खुल्छन् । र दुई गर्भाशयसमेत हुन्छन् । मायो क्लिनिकको वेबसाइटमा भनिएको छ, ‘दुई गर्भाशय भएका भएका महिला हत्पति आमा बन्न सक्दैनन् । गर्भधारण भएपछि पनि गर्भपातको आशंका हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किड्नीसँग जोडिएका समस्याको पनि सामना गर्नुपर्छ ।’ आखिरमा निक्कीले शल्यक्रियाबाट दुवै गर्भाशयलाई निकालिदिने निर्णय लिइन् । यसको मतलब अब उनी आमा बन्ने सम्भावना पूर्णरुपमा अन्त्य भएको छ । शल्यक्रियापछि आफू सामान्य गुप्तांग लिएर बाँचिरहेको निक्की बताउँछिन् । Posted by
फेरी आउने भयो जय किशन बस्नेत को धूम २
जय किशन बस्नेत को निर्माता तथा निर्देशन मा फेरी बन्न्ने भयो धूम २/जस अगाडी धूम मा भने शोभित बस्नेत ले निर्देशन गर्नु भयको थियो /
जस अगाडी धूम मा अर्जुन र जयकिशन मेन रोल मा थिय भने धूम २ मा जयकिशन बस्नेत र शोभित बस्नेत लाई मेन रोल मा पाउन सकिन्छ/
जसमा कलाकार हरु मा जयकिशन बस्नेत ,शोभित बस्नेत,सिर्जना भट्टराई,,राम गौतम,सिर्जना संजोक राना/
जसलाई जिबन श्रेष्ठ ले खिच्दै छन् भने दुन्द निर्देशन N.B.महर्जन ले गर्दै छन्/
जसको छायांकन सुरु अहिले काठमाडौं बाट हुदै अनि मनाङ को तिलिचो ताल मा हुने छ//
नेपालि फिल्मी खबर
लक्की मिडिया हाउसले संघलाई १० हजारसहित सम्मान गर्ने...
मोफसलकै चर्चित लक्की मिडिया हाउस चितवनले चलचित्र पत्रकार संघ चितवन शाखालाई सम्मान गर्ने भएको छ । चलचित्र क्षेत्रको विकास, प्रवद्धन र प्रचारमा निरन्तर सक्रिय लक्की मिडिया हाउसले चलचित्र पत्रकार संघ चितवन शाखालाई नगद १० हजारसहित सम्मान गर्ने भएको हो । नेपालको सिने बजारको क्षेत्रमा चितवन शाखाले गरेको अतुलनिय योगदानको कदर गर्दै संघलाई सम्मान गर्न लागिएको लक्की मिडिया हाउस चितवनका अध्यक्ष हरि कार्की "लक्की"ले जानकारी दिनुभयो । चलचित्र पत्रकार संघ चितवन शाखाका अध्यक्ष राजकुमार लामिछानेले लक्की मिडिया हाउसले गर्न लागेको यो सम्मानले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि अझै केहि गर्ने प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो । अध्यक्ष लामिछानेले आगामी दिनमा पनि लक्की मिडिया हाउसको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दै लक्की मिडिया हाउस परिवार र अध्यक्ष कार्कीलाई विशेष धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो । कार्की चलचित्र पत्रकार संघ चितवनका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उक्त रकम आगामी चैत्र १४ गते चलचित्र "ब्वाइफ्रेण्ड"को विशेष शो गर्ने दिन एक कार्यक्रमकाबीच हस्तान्तरण गरिने कार्कीले बताउनुभयो । चलचित्र ब्वाइफ्रेण्डको विशेष शो पनि लक्की मिडिया हाउसले नै गर्न लागेको हो । चितवनमा रहेको लक्की मिडिया हाउसले चलचित्र क्षेत्रका हरेक गतिबिधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ तथा पुराना चलचित्रहरुको तिब्र रुपमा प्रचार प्रसार गर्दै आइरहेको छ ।
दिपक राज को चाहिदैन बोलको गीत रेकर्डिङ्ग हुँदै
अहिलेका ब्यस्त सङ्गितकार दिपक राज बिश्वकर्मा र रजिना श्रेस्ठको युगल स्वर मा एउटा गीत रेकर्डिङ्ग हुँदै गर्दा गीतले बजार तताउने अनुमान संगीत बजारमा गरिएको छ ।पेशाले देशको पहारे दार दिपक जन्म थलो चितवन छोडेर काठ्मान्डौमा बस्नु हुन्छ । छिट्टै बजारमा लेराउन लागिएको यो अल्बम को गीत धमाधम पिक डिजिटल मा रेकर्डिङ्ग हुँदै छ ।यस गीतमा दिपक राज को शब्द संगीत सुन्न सक्नु हुनेछ ।यस गीतको भिडिओ पनि छिट्टै बजार्मा लेराउने र ऐले को समयमा भिडिओ बिना गीतको कुनै औचित्य नि नहुने बताउनु भयो
२०७३ ,फाल्गुन , ११
काठमाडौं । सरकारले तनहुँमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चिडियाखाना स्थापना गर्ने भएको छ । जाउलाखेलको चिडियाखानालाई भक्तपुरको सूर्यविनायक सार्ने तयारी भइरहँदा सरकारले तनहुँको भानु-घाँसीकुवा नगरपालिकाको वन क्षेत्रमा ‘प्राणी उद्यान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । तनहुँको छिर्केनीभञ्ज्याङ क्षेत्रमा प्राणी उद्यान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सहकाय प्रवक्ता यज्ञनाथ दाहालले जानकारी दिए । ४२५ हेक्टर फराकिलो प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक प्राणी उद्यान बनाउने सरकारी योजनाअनुरुप तनहुँमा नेपालकै अहिलेसम्मकै ठूलो चिडियाखना (प्राणी उद्यान) बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । अहिले जाउलाखेलको चिडियाखानालाई भक्तपुरको सूर्याबिनायकका २३१ हेक्टर वन क्षत्रेमा सार्ने गरी काम भइरहेको छ । सूर्यबिनायकको वन क्षत्रेमा अहिले कम्पाउण्डिङको काम सुरु गरिँदैछ । अब बन्ने प्राणी उद्यान भने ४ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिने छ । जहाँ नेपालमा पाइने धेरैजसो वन्यजन्तुलाई राखिनेछ । सहायक प्रवक्ता दाहलले लोपोन्मुख वन्यजन्तु र तिनका विभिन्न प्रजातिहरु तनहुँको प्राणी उद्यानमा राखिने बताए । पर्या-पर्यटन विकासको योजना ‘यसलाई नेपालका वन्यजन्तुको अध्ययन केन्द्रका रुपमा पनि विकास गर्ने योजना छ । सँगै पर्या-पर्यटनको विकासका लागि पनि यो कोसेढुंगा सावित हुनेछ’ दाहालले भने । तनहुँमा राखिने प्राणी उद्यानको विकासका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको छ । गुरुयोजना बनाएर उद्यान स्थापनको काम थालि हाल्न मन्त्रालय आतुर रहेको दहालले बताए । ‘यसको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । सो क्षेत्र प्राणी उद्यान राख्न निकै उपयुक्त देखिएको छ’ उनले भने,’जंगलमै राखिने भएकाले यस्तो उद्यानमा घुम्न जानु नेपालमा नयाँ किसिमको अनुभव हुनेछ ।’ उनले यसले पोखरा जाने पर्यटकलाई समेत समेट्ने भएकाले स्थानीय क्षेत्रमा यसले पर्यटकीय घनत्व बढाउन पनि मद्दत पुग्ने दाबी गरे । -
पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव : नेतृत्वका लागी अनेरास्ववियूभित्र कुटाकुट, नेविसंघमा हात हालाहाल
२८ माघ २०७३ स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनको चुनाब नजिकिंदै जाँदा स्ववियुमा आफ्नो संगठनका तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने बिषयमा हरेक बिद्यार्थी संगठनभित्र रहेका गुट-उपगुटबीच तिब्ररुपमा अन्तरसंघर्ष चल्न शुरु भएको छ l चुनाब जित्नका लागि आफ्नै संगठनभित्र एकताबद्ध भएर स्ववियु चुनाब लड्नुपर्नेमा चुनाबमा जाने नेतृत्वका लागि केही बिद्यार्थी संगठनभित्र उत्पन्न भएको बिबाद कुटाकुटमा परिणत भएको छ lयता मुलुककै सबैभन्दा ठुलो र धेरै बिद्यार्थी अध्ययन गर्ने अनि हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियु चुनाबमा संगठनभित्रको कुन गुटले नेतृत्व गर्ने भन्ने बिबाद हुँदा नेपाली कांग्रेसको भात्री संगठन नेपाल बिद्यार्थी युनियन र नेकपा (एमाले)को भात्री अनेरास्ववियु भित्रै बिहिबार कुटाकुट भएको छ l
बिहिबार बिहान एमाले अखिलका विद्यार्थीहरु नै कुटाकुटमा उत्रँदा ८ जना घाईते भएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको अनेरास्ववियू भित्रको आपसी किचलो विहीबार कुटाकुटको अवस्थामा पुग्यो । सो कुटाकुटमा परी आठ जना घाईते भएका छन् ।बुधबार त्रिवि जिल्ला आयोजक कमिटि संयोजक विवेक देवकोटा र पृथ्वीनारायण क्याम्पस एकाई संयोजक राजन शर्मा पराजुलीबीच भएको विवाद बढ्दै जाँदा विहीबार दुई पक्षबीच झडप नै भएको हो । झपडमा पराजुली समूहका विनय राना, बिमल पौडेल, दिनेश ढुंगाना र सुरज अधिकारी घाईते छन् । उनीहरुको मुख र अनुहारमा पराजुली समूहले हेल्मेटले प्रहार गरे । चारै जनाको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार गरिएको छ ।झडपमा देवकोटा पक्षका अमृत सुवेदी, शेखर पौडेल, अनुप लामिछाने र सुमन ढुंगाना सामान्य घाईते भए । एमालेको मुख्य दुई गुटको असरले क्याम्पस पनि नराम्ररी प्रभावित छ । देवकोटा केपी ओली पक्षधर हुन् भने पराजुली नेपाल पक्षका हुन् ।बुधबार बिहान स्याङ्जा पोखरा सम्पर्क कमिटिको भेलाका क्रममा दुई पक्षबीच मनमुटाव भएको हो । सर्वसम्मत रुपमै भेलाको प्रमुख अतिथिमा स्याङ्जा घर भएकै प्रदेश नं. ४ संगठन कमिटि सदस्य नारायण मरासिनीलाई बनाईएको थियो । तर एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल कार्यक्रम बीचमै प्रवेश गराईयो र प्रमुख अतिथि बनाईएपछि विवाद सिर्जना भएको त्यहाँ उपस्थिति विद्यार्थी बताउँछन् ।भेला आयोजक सदस्यहरु र क्याम्पस एकाई संयोजक हैसियतले राजन शर्मा पराजुलीले प्रमुख अतिथि भनेर अर्कोलाई बसाईसकेको अवस्थामा ढकाललाई त्यहाँ पु¥याउनु नै गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ‘पार्टी सचेतक पक्कै पनि भेलामा आउनु राम्रो कुरा हो l तर अर्को व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि भनेर आसिन गराईंरहँदा भेला सकिन आधा घण्टा बाँकी हुँदा अरुलाई प्रमुख अतिथि बनाईएमा मरासिनीप्रति अन्याय हुन्छ कि हुन्न ?’ पराजुलीले भने– ‘त्यसैले सर्वसम्मत भएको यस्तो कार्यक्रमलाई खत्तम पार्ने गरी उहाँहरु उद्दत हुनुहुन्छ । हामीले वास्ताविकता मात्र बताउन खोज्यौं । अश्लिल गालीगलौजमा उत्रनुभो ।’ विवाद बढ्दै गएपछि विवेक देवकोटाले पराजुलीमाथि आमा मुछेर अश्लिल गालीगलौज गरेको पराजुलीको आरोप छ । घटनापछि पृथ्वीनारायण क्याम्पस एकाई कमिटिको नाममा संगठन अनुशासन कमिटि र पार्टीलाई बोधार्थ पठाएर प्रेस विज्ञप्ती पनि जारी भयो ।क्याम्पसमा अनेरास्ववियू इकाई कमिटिबीचको विवाद नयाँ भने होईन । गत मंसिरमै आयोजक कमिटि गठन गरी सर्वसम्मत रुपमा राजन शर्मा पराजुलीलाई नै संयोजक बनाईएको थियो ।देवकोटाले आफूले ‘भाते’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको स्विकार गरे । उनले आपसी सहमतिमै दुवै तर्फबाट भएका कमजोरी स्विकार गरी क्षमा याचना गर्ने बताएका थिए ।विहीबार अनेरास्ववियू जिल्ला कमिटि उपाध्यक्ष शंकर शैंजुले प्रेस विज्ञप्ती फेसबुकमा प्रचार गरेको भन्दै देवकोटा पक्षले पुनः विवाद गरेपछि कुटाकुटको अवस्था उत्पन्न भएको पराजुली पक्षको आरोप छ । अमृत सुवेदीले एक्कासी दिनेश ढुंगानामाथि हात छाडेपछि झडप भएको थियो । बुधबारको घटनामा सचिवालय सदस्य नरेश रोकाया, केन्द्रिय सदस्य आशिर्वाद सुवेदीका साथै पार्टी विद्यार्थी फाँट ईञ्चार्ज दिलिप न्यौपाने प्रत्यक्षदर्शी रहेपनि कुनै पहल नगरेको पराजुली पक्षले गुनासो गरेको छ । घटनापछि पराजुली पक्षले कारबाहीको माग गर्दै वडा प्रहरी कार्यालय बगरमा उजुरी दिएका छन् । क्याम्पसमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली परिचालित छ ।यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारी अनुसार, नेविसंघ पृथ्वीनारायण क्याम्पस एकाई सभापति छनौट गर्ने विषयमा विद्यार्थीबीच बिहिबार नै झडपको अवस्था आएको आयो । दुवै पक्षले आफ्नो हुनुपर्ने जिकिर गरेपछि बिहीबार दिउँसो झडपकै अवस्था आएको हो । पटकपटक हात हालाहालको अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।क्याम्पस गेट नजिकै एक होटलभित्र र बाहिर दुई पक्ष विवादमा उत्रेका हुन् । देउवा पक्षका नेविसंघ केन्द्रिय सदस्यहरु देवकृष्ण पराजुली, गोपाल गुरुङ सहित भानु ढकाल क्याम्पस गेट पुगेर एकाई सभापति घोषणा गर्न लागेका बेला बिबाद उत्पन्न भै तनाव भएको थियो । पछिल्लो पटक कार्यबाहक सभापति समेत बनेका बालकृष्ण सापकोटा, दिनेश शर्मा लगायतले विधिसम्मत् ढंगले सभापति चुनिनुपर्ने अडान लिएपछि वातावरण असहज बनेको थियो । सापकोटा रामचन्द्र पौडेल पक्षधर हुन् ।केन्द्रिय सदस्यहरु ढकाल, पराजुली, गुरुङ र पुनम भट्टले निर्णय गरेर क्याम्पस एकाई सभापतिमा दिपक शर्मा वाग्लेलाई चयन गरेको जानकारी गराएका थिए । क्याम्पस गेटमा एक कार्यक्रमबीच नै वाग्लेलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिईएको पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
"विजया दशमी २०७१ को शुभ अवसरमा नयाँ आशा,उत्साह अनि उमंग पलाओस्,निरन्तर सफलताले शिखर चुमिरहोस् ,हिम्मत अठोट र आत्मबिश्वास जागोस् , सुख ,शान्ति ,सम्वृदी सुस्वास्थ्य उत्तरोत्तर प्रगति एंव दिर्घायूको कल्याण होस भन्ने आकांक्षाका साथमा हाम्रो तर्फ बाट यहाँहरू सबै लाई बडा दशैं २०७१ को हार्दिक शुभकामना
अनायासका एकदर्जन मुक्तक
'टोकियोमा कफी कक्टेल' :-
तिहारका शुभकामना/तस्बिर SMS
नेपालि मोडेल तथा कलाकार
विचार र जानकारी
विचार र राजनीति
श्रीमानकी प्रेमीकालाई यो हाल (फोटो फिचर)
नारिहरुको गुण र बर्गिकरण डी कम्पनिका कुबेर सिंह राणा को चर्तिकला पर्दाफास ... सोझा केटीहरुलाई फसाएर भिडियो बनाउने गरेको खुलासा...
पैसा पाए आफु अस्लिल चलचित्र पनि खेल्न तयार रहेको बताएकी छिन् ।
तिर्सनाको नांगिने क्रम अझै पनि जारि मोडलिङमा जम्दै प्रेशना गुरुङ नेपाली मोडल तथा नायिकाहरु नाङ्गगिन खोजी रहेका हुनछन् क्याट्रिना कैफलाई अँगालो मार्ने क्रममा स्तन समातेपछी बलिउडमा भुइचालो (फोटो फिचर)
प्रितीलाई विवाह गर्छु : सलमान खान
केटीले कपडा खोलेर नाच्न थालेपछि भागा-भाग (तस्विर सहित)
बिजय कृष्ण मिडिया प्रा.लि.
पोष्ट गरिएका सामग्री
Welcome To Hotel Serenity ,pokhara
हजुरहरुको विचार प्रतिक्रिया
Online nepali filmy khabar
Online nepali filmy khabar Classic Clock
http://ramkrishnakapana.blogspot.com/. Simple theme. Powered by Blogger.